Kisimusi mukombe kushongedza Art sens - mazano eimba nebindu
Kisimusi mukombe kushongedza
13.11.2017 Yakatumirwa na: Art Sense
Kushongedza, Pfungwa Pamba, Kisimusi yakashongedzwa
Inotaridzika uye inonakidza Kisimusi mukombe kushongedza.
Mukusiyana kwekutanga, zvinodikanwa kuti uparadzanise kumusoro kwemukombe paunonwa. Iko kuisirwa kuri kuburikidza ne roll rebepa remapepa. Unogona kuparadzanisa dzimwe nzvimbo sezvaunoda. Wobva wapenda nzvimbo yakafumurwa nechena echena wepeyinti uchishandisa brashi kana chipanje sechiputi. Kana, unogona kupfapfaidza neapureta spray, ino ndiyo iri nyore sarudzo. Dhirowa munhu wechando - kutanga maziso, ipapo mhino iri muchimiro chekaroti, kunyemwerera, pine bazi rinofukidza muganho pakati pevara uye chikamu chakachena. Kuti "uparadze" mativi, shandisa yakanyoroveswa swab nemusanganiswa wepende tsvuku uye chena. Mushure mekunge mudhira wacho waoma zvachose, chifukidza nejira rakachena remvura-yakavakirwa varnish. Kana iwe uchida kufukidza kakawanda nevarnish, imwe neimwe yakapfuura safu inofanira kunge yakaoma zvakakwana. Mukapu yakashongedzwa kudaro inogona kushambidzwa zviri nyore, asi haikurudzirwe kuita izvi mundiro yokugezesa.
Mukusiyana kwechipiri, unoshongedza nenzira yakafanana, asi unodzosera girazi kumashure uye haudi kutiparadzanisa nezvimwe zvikamu zvaro, asi dhirowa pane hwese hwenyika kana kwaunoda. Iyi sarudzo inobatsira zvakanyanya kushandisazve zvisina kufanira, girazi, makapu akapwanyika, pamwe nekuwana mudiki, mashoma echando echando chekushongedza kweKisimusi.
mazano ekushongedza kweKisimusi, zano rekushongedza kweKisimusi, Kisimusi yakashongedzwa, Kisimusi mukombe kushongedza, Kisimusi mukombe, chando, echando murume pane girazi, echando, Kisimusi yakashongedzwa, kapu, kapu yechando, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Yakareba bulb kisimusi kushongedzwa
Iko kushongedza kwemuti weKisimusi ndechimwe chemashiripiti ezororo rino. Naizvozvo, kutengwa kwe ...
Akabudirira Kisimusi Kurongedza
Pfungwa dzinonakidza dzekushongedzwa nemaoko Kisimusi yakashongedzwa. Kune vese vakadzi vanofarira kupfeka ...
Zviitire wega muti weKisimusi
Muti weKisimusi chikamu chakakosha chechiratidzo cheKisimusi, asi isu hatigarova nemukana ...
Zviite iwe pachako kupenya Krisimasi mabhora
Mune iyo mitsara inotevera isu tinokupa iwe zano rekugadzira Krisimasi inopenya ...
Kana usati wakashongedza imba yako yeKisimusi, unogona kutanga nekrisimasi wreath iyo ...
Asiri-mwero zano rekushongedza kweKisimusi
Icho chinonakidza uye chisingaenzaniswi chinyorwa cheKisimusi mukombe kushongedza. // //
December aive akanakisa kwemwedzi yechando. Mahara anotarisirwa zvakanyanya ari kusvika ...
Imwezve yechando murume anogadzira kapurasitiki makapu
Kugadzira munhu wechando kunze kwemakapu epurasitiki ndiyo imwe nzira yakanaka kana pasina chando ...